Fox Bookmark | Ọrụ On
Alicia tomero | | Crafts, Ọrụ nka, Crafts maka ụmụaka, Crafts na ihe
Ọ bụrụ na-amasị gị nka na ụdị anụmanụ, ebe a anyị na-atụ aro ndị a ibe edokwubara yabụ ị nwere ike ịmere onwe gị ma tinye n'akwụkwọ ọkacha mmasị gị. Ma ọ bụ otú ị nwere ike ime ma nye pụọ na akwụkwọ. Ha bụ echiche zuru oke ma nwee ihe oyiyi na-atọ ọchị nke e mere n'ụdị nkịta ọhịa. Ị ga-ahụ ka ngwa ngwa na mfe ha na-eme.
1 Ihe m ji mee nkịta ọhịa:
Ihe m ji mee nkịta ọhịa:
A4 nha kaadị aja aja dị ọkụ.
Mpempe akwụkwọ aja aja gbara ọchịchịrị.
Ihe nrịba ama ojii.
Anyị na-ewere kaadiboodu agba aja aja ma hazie ya ka ọ bụrụ square zuru oke. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, akụkụ ya niile ga-atụle otu. Anyị we bepụ ya.
Anyị na-edobe square ahụ n'ụdị rhombus ma gbadaa nkuku ala elu. A na-apịakọtakwa akụkụ ndị e kpụrụ n'aka nri na aka ekpe ọzọ.
Anyị na-emeghe ibe ahụ. Anyị na-ewere akụkụ nke otu n'ime akwa akwa ma tụgharịa ya.
N'ime mpempe a na-emepụta: akụkụ aka nri na aka ekpe anyị na-atụgharị elu.
Nkuku abụọ ga-etolite n'elu. Anyị na-ewere otu na-ehulata ya ala, ma obliquely. Anyị na-eme otu ihe ahụ na akụkụ nke ọzọ.
Anyị na-apịaji ihe anyị na-apịaji ọzọ, ma n'elu, na-eme ntị.
Anyị na-etinye ọnụ ọgụgụ ahụ na kaadiboodu agba aja aja iji nwee ike bepụ triangle n'otu ụzọ ahụ dị ka akụkụ elu nke fox. Anyị ga-etinyekwa ihe oyiyi ahụ na kaadiboodu na-acha ọcha iji mee ka ụfọdụ mpempe a na-atụgharị nke a ga-ejikọta n'akụkụ ihu.
Anyị na-ejikọta triangle agba aja aja, ahịrị ndị a na-atụgharị ma mee triangles ọcha abụọ nke anyị ga-ejikọta na ntị nkịta ọhịa. N'ikpeazụ na akara ojii anyị na-adọta imi na anya abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Crafts maka ụmụaka » Ibe edokwubara nke Fox
Osisi oyi nwere agba acrylic na kaadiboodu